China Multi-tier Mezzanine orinasa sy ny mpanamboatra |Ampahafantaro
Karazana racking: Multi-tier mezzanine
Habe: namboarina Loading: 200-2000kg isaky ny ambaratonga
dity 50mm/75mm Toerana niaviany Nanjing, Sina
Fampiharana: be mpampiasa amin'ny trano fanatobiana entana lehibe amin'ny fitahirizana lehibe takiana sy ny tanana fitehirizana entana kely, ohatra, auto piesy, elektronika fitaovana sy ny sisa
Ny mezzanine multi-tier dia natao ho rafitra misokatra.Ny tombony lehibe dia mety tsara ho an'ny tahiry voafono, manome fahitana avo ho an'ny entana tsy misy toerana fitehirizana voatondro.Izany dia mandamina ny mpandraharaha ho an'ny fahombiazan'ny habakabaka sy ny fidirana haingana.
②Haavo ambony indrindra
Multi-tiermezzanineazo amboarina ho rihana roa na mihoatra, ka mahatonga ny fitahirizana ho avo roa heny, telo na mihoatra, amin'ny alàlan'ny fampiasana toerana avo tsara., tsy mila gorodona mezzanine ara-drafitra misaraka.
③Rafitra mafy orina
Ny mezzanine multi-tier dia miorina amin'ny firafitry ny talantalana longspan, na rafitra fametahana pallet mifantina.Plus beam gorodona, gorodona, tohatra, handrail, skirtboard ary kojakoja hafa, ny rafitra racking dia miorina sy mafy orina.Misy safidy karazana gorodona mifanaraka amin'ny fepetra samihafa.
④ Fanitsiana moramora
Ny mezzanine multi-tier dia mora amin'ny fametrahana sy ny fandravana, ary mamela ny fanitsiana moramora ny haavon'ny racking araka ny fitakiana fitehirizana tena izy, izay manampy amin'ny famoronana toerana fitehirizana manokana hifanaraka amin'ny tahiry voatahiry.
Raha ampitahaina amin'ny fifindran'ny trano vaovao, na fanitarana ny trano ankehitriny, ny mezzanine misy ambaratonga maro dia manohana ny fananganana gorodona sy talantalana ho iray, izay mitsitsy be ny vidiny, ny fotoana ary ny mpiasa.
teo aloha: Longspan Shelving
Manaraka: Fametrahana Pallet Selective